F1 ကိုအမြဲတမ်းနှိပ်နေ၇လို့ပါ... - MYSTERY ZILLION
ညီလေး စက်မှာ စက်ကိုစဖွင့်လိုက်တာနဲ့ fan error ဆိုပြီးတော့f1 ကိုအမြဲတမ်းနှိပ်နေ၇တယ်
ပြီးမှသာ window ကိုတက်ပါတယ်..။အဲ့လိုမနှိပ်၇အောင် ကူညီကြပါခင် ညာ..( fan အသစ်တော့မလဲပါ၇စေနဲ့နော်...:D.) ။ ကြာလာ၇င် စက်ကိုဘယ်လိုထိခိုက်နိုင် ပါသလဲဟင်...
:Oအဲဒါ CPU Fan မလည်တော့လို့ CPU ကပူလာလို့တက်လာတာဖြစ်မယ် စက်ကော restart ကျကျသွားလား Fan လည်မလည်ပြန်စစ်ကြည့်ဦးနော ကြိုးတွေဘာတွေညပ်နေလားမသိဘူး
မဟုတ်ရင် CPU ပါကြွသွားမယ်ဆရာ:106:
ညီလေးရေ.. အဲဒါ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး အဲဒီချိန်မှာ Del key နှိပ်ပြီးတော့ CMOS ထဲ ၀င်ပြီးတော့ Floppy Drive ကို None ပေး ဒါမှ မဟုတ် Not install ဒါမှ မဟုတ် Disable (စက်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး မတူလို့နော်) ပါတဲ့ဟာ တစ်ခုခု ပေးလိုက်ပါ..ပြီးရင် F10 နှိပ်ပြီး OK ပေးလိုက်ရင် စက် အစကနေ ၀င်းဒိုး ကို ချက်ခြင်းရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်ဖြစ်တုန်း:)ကတော့ bios battery လဲလိုက်ရင်ပြန်ကောင်းတယ်ဗျ...:6:battery
ကောင်းမကောင်းစစ်ကြည့်ပါခင်ဗျာ...ကျွန်တော်ကြုံဖူးတာလေးပါ..မှားသွားရင် sorry နော်
အကိုေ၇..CMOS ထဲကို ဝင် လိုက်တာ floppy Drive တော့မ တွေ့ဘူး HD နဲ့ CD ROM က တော့ Enable ကျန်တာတွေက Disable ပဲ အကို၇ ..နောက်တစ်ခုက wait for " F1" Fun error က ကို Disable လုပ်လိုက်တော့ အသံတော့ မြည်သေးတယ် Fun error လ ည်းတွေတယ် ..F1 တော့မနိပ်၇တော့ဘူး..
အဲအတိုင်းထားလိုက်၇င် ဘာဖြစ်နိုင် လည်းတော့မသိဘူး ကူညီပါအုံး ဘယ်လိုလုပ်လိုု့၇မလဲ ..အကိုေ၇..
fun error ဆိုရင်တော့ ဒီအတိုင်းထားရင ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ.. သုံးတာ နည်းနည်းကြာလာရင် စက်က restart တို့ shutdown တို့ ကျကျသွားတက်ပါတယ်.ပြီးတော့ cpu ကိုလည်း သွားထိနိုင်ပါတယ်. fun ကိုအသစ်မလဲချင်သေးရင် fun ကိုဖြုတ်ပြီး ကော်လေးနဲ့(heatsenk ကော် စာလုံးပေါင်းမှားရင်ခွင့်လွှတ်နော်) ပြန်တက်ထားကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် ပြန်ကောင်းနိုင်ပါသေးတယ်. အဲလိုမှ မရရင်တော့ fun အသစ်လဲလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ...:):)
အစ်ကိုပြောသလိုဖြစ်မှာတော့ စိုးတယ် (fan ဖိုးထက်ပိုကုန်နေလိမ့်မယ်..:D)
အခုလ ို့ပြောတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲဗျာ..:6:
fan error ဆိုတာ ကြိုးတတ်တာမှားနေလို့ပါ။ Board ပေါ်ကိုသေချာကြည့်ပါ။ ဘေးနားမှာ CPU Fan လို့ရေးထားတဲ့နေရာကိုတတ်ရမှာပါ။ အခုက CPU Fan မှာမတတ်ပဲ System fan မှာသွားတတ်ထားတာဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ ကြိုးပြောင်းတတ်ကြည့်ပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။
CPU Fan လို့ ေ၇းထားတဲ့နေ၇ာမှာပဲ တပ်ထားတာပါပဲ..။
fan လည်နေတာ ကြည့်၇တာတော့ နှေးနေတယ်သလိုထင်၇တယ်ဗျ..
fan လဲ၇တော့မယ် ထင် တယ် အကိုေ၇...